Ukubaluleka kokuqina okhalweni
Kunezinhlobo eziningi zokubopha okhalweni, futhi kufanele ucabangele izidingo zakho lapho uzikhetha, futhi uzihlole kusukela kula maphuzu alandelayo. 1. Ngabe inhloso yokuvikela umgogodla we-lumbar noma i-hip? Owokuqala udinga ukuthenga unogada okhalweni oluphakeme, owokugcina udinga ukuthenga unogada okhalweni oluphansi. Isiguli ...
Ngabe ulisebenzisa kahle ibhande lokwesekwa kwesisu?
Indima yebhande lesisu esikhulelwe ikakhulukazi ukusiza abesifazane abakhulelwe ukuthi baphakamise isisu. Inikeza usizo kulabo abanomuzwa wokuthi isisu sikhulu ngokuqhathaniswa futhi sidinga ukubamba isisu ngezandla zabo lapho sihamba, ikakhulukazi lapho imisipha exhuma okhalweni ivulekile. Okwe-p ...
Amapayipi amadolo abhekisa entweni esetshenziselwa ukuvikela amadolo abantu. Inemisebenzi yokuvikela ezemidlalo, ukuvikela amakhaza nokufudumala, kanye nokugcinwa ngokuhlanganyela. Ihlukaniswe ngamaphakethe wamadolo ezemidlalo namaphakethe wamadolo ezempilo. Kufanelekile kubasubathi, abaneminyaka ephakathi nendawo kanye nabantu asebekhulile, neziguli ezine-k ...
Uyini umsebenzi webhandeshi likanxantathu?
Amabhandeshi angunxantathu abonakala evela kaningi ezimpilweni zethu, kodwa ungawabukeli phansi onxantathu. Indima yalo emsebenzini wobudokotela akufanele ithathwe kancane. Ibhandeshi elingunxantathu lisetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela amanxeba nokulungisa izitho ezilimele. Uma kunesidingo, kufanele kwenziwe ngamabhandeshi ...
Qaphela lokhu lapho usebenzisa umkaki wendololwane
Izinkomba ze-elbow brace: Ukuqhuma kwemigqa yangaphakathi neyemuva yokuhlangana kwendololwane. Ukukhululwa ngokuhlanganyela kwe-Elbow kanye ne-arthritis ngemuva kokuhlinzwa noma ukuphuka. Ukwelashwa okulondolozayo kokulimala kwamalunga nezicubu ezithambile kanye nokuvimbela isivumelwano. I pa engezansi ...
Amabhande we-orthopedic ashintshekayo
I-brace brace isakhiwo esihlangene esiseduze nesakhiwo somzimba womuntu futhi singafakwa eduze nezicubu zomuntu ezihlangene ukuze zikwazi ukunethezeka futhi kube lula. I-Chuck ene-angle eguquguqukayo, ingalungiswa kuma-engeli ahlukahlukene ngokuya ngezidingo ...
Ukwethulwa kokhololo wesibeletho
Ikhola yomlomo wesibeletho iyithuluzi lokwelashwa elisizayo le-spondylosis yomlomo wesibeletho, engabopha futhi ivikele umgogodla womlomo wesibeletho, inciphise ukugqoka kwezinzwa, inciphise ukusabela okubuhlungu kwamalunga we-intervertebral, futhi inenzuzo ekuhlelweni kwe-edema yezicubu kanye nokududuza ...